Ama-Semalt Ukwabela Ama-5 Amathiphu Ukuze Udwebe Idatha Kusuka Iwebhusayithi
Idatha ayisoloko isesimweni esifanelekayo, kodwa ikhona kwi-Inthanethi. Ulwazi oluningi luyatholakala ngezilimi ezihlukahlukene, okwenza kube nzima ngathi ukuliqonda futhi konke akunakutholakala ku-CSV noma kwenye ifomethi. Ezimweni ezinjalo, kuyoba nzima kuwe ukusebenzisa lolu lwazi kahle. Futhi, awukwazi ukuwuhlanganisa namasethi amadatha futhi uwahlole ngokuzimela. Ngakho, ukukhipha idatha yindlela kuphela yokudala amakhophi emafomethi afanelekayo nokufinyeleleka - valor correo certificado chile.
1. Sebenzisa i-Google Spreadsheets ne-Google Chrome
Kuphephile ukusho ukuthi kokubili i-Google Chrome ne-Google Spreadsheets isiza ukufaka idatha kumaminithi angu-5 kuphela, futhi akudingeki ukuthi ufake noma iyiphi ikhodi nakanjani. Ukwazi ukuhlelwa kwesayithi lakho kuyisinyathelo sokuqala sokususa nokusebenzisa idatha. Indlela elula yokwenza lokho kungumyalo we-ImportHTML kuma-Google Spreadsheets. Isebenza njengemilingo futhi ishaya yonke iwebhusayithi yakho ngaphandle kokuyekethisa kwikhwalithi. Ungasebenzisa futhi isofthiwe enobungane be-Chrome futhi iza nezinto eziningi.
2. Sebenzisa i-Scraperwiki ngemiphumela engcono
Uma ufuna ukukhipha imininingwane eyinkimbinkimbi futhi ungenayo amakhono okuhlela, kuzomele uzame i-Scraperwiki ngemiphumela engcono. Kuyasiza ukuhlunga amakhasi ahlukahlukene e-Wikipedia namawebhusayithi aqinile futhi ulande yonke indawo ku-hard drive yakho kungakapheli imizuzu embalwa. Leli thuluzi lifanele ukutshala imali yakho nesikhathi sakho futhi uqinisekise ukuhlinzeka ngemiphumela engcono kakhulu nenembile kakhulu. I-Scraperwiki inemisebenzi ehlukene, njengokuthi ungabhala amakhodi ahlukene, ungacela ochwepheshe ukuba babhale abahlukumelayo egameni lakho futhi uxhumane nemiphakathi ye-Scraperwiki ngemiphumela engcono.
3. Qondisisa isakhiwo se-scraper
Kubalulekile futhi ukuqonda isakhiwo se-scraper. Iningi le-scrapers lithengiswa izingxenye eziyinhloko ezintathu: umgca wamakhasi okukhishwa, indawo yedatha ehleliwe ukuze igcinwe njenge-database, nomlandi noma umlingisi osiza ukwengeza i-URL emgqeni.
4. Qonda ukubaluleka kokwakheka:
Ukudweba kuyindlela yokukhipha idatha emakhasini ahlukene ewebhu, amafayili e-PDF, neminye imibhalo, okwenza isetshenziswe futhi ifundeke ukuqhutshwa okuqhubekayo. Ngenye yezindlela eziwusizo kakhulu futhi eziphelele ongayisebenzisa ukuze ubuthe futhi usebenzise idatha. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi awudingi ukuba namakhono okuhlela ukukhipha idatha uma usebenzisa amathuluzi afana ne-Kimono nokungeniswa. io.
5. Funda ukuthi ungahlunga kanjani:
Kufanele ufunde ukuthi ungaba kanjani uma ufuna ukukhipha idatha kumakhasi ewebhu ahlukene njalo. Futhi, ungafunda uma unolwazi oluningi ukuze umangale futhi ufuna ukuyisebenzisa kabusha kuwebhusayithi yakho. Uma uthola izaziso ze-imeyili mayelana nemikhiqizo ezithakazelisayo namasevisi, ungase ufune ukukhipha futhi ufunde okuyisisekelo. Kuyiqiniso ukuthi ukuhlunga kuwumsebenzi olula odinga amakhono ambalwa okuhlela. Amanye amathuluzi we-web scraping awadingi ukuthi ufunde amakhono wokuhlela nezilimi, okusho ukuthi ungenza imisebenzi yakho ngaphandle kwekhodi.